Vaovao - Syringe
Inona no atao hoe syringe?
Ny syringe dia paompy misy plunger sliding izay mifanaraka tsara ao anaty fantsona.Ny plunger dia azo sintonina sy atosika ao anatin'ny fantsona cylindrical marina, na barika, mamela ny syringe hisintona na hamoaka ranon-javatra na entona amin'ny alàlan'ny lavaka eo amin'ny faran'ny fantsona.
Ny fanerena dia ampiasaina amin'ny fampiasana syringe.Matetika izy io dia misy fanjaitra hypodermic, nozzle, na fantsona manampy amin'ny fitarihana ny fivoahana miditra sy mivoaka ao anaty barika.Ny syringe plastika sy fanariana dia matetika ampiasaina amin'ny fitantanana fanafody.
Hafiriana ny syringe?
Ny fanjaitra mahazatra dia miovaova ny halavan'ny 3/8 inch ka hatramin'ny 3-1/2 inch.Ny toerana misy ny fitantanana dia mamaritra ny halavan'ny fanjaitra ilaina.Amin'ny ankapobeny, arakaraka ny halalin'ny tsindrona no lava kokoa ny fanjaitra.
Firy mL no tazonin'ny syringe mahazatra?
Ny ankamaroan'ny syringe ampiasaina amin'ny tsindrona na ny fandrefesana ny fanafody am-bava dia voakilasy amin'ny milliliter (mL), fantatra ihany koa amin'ny hoe cc (centimeter cubic) satria io no singa manara-penitra ho an'ny fanafody.Ny syringe fampiasa matetika indrindra dia ny syringe 3 mL, fa ny syringe kely 0,5 mL sy lehibe hatramin'ny 50 mL dia ampiasaina koa.
Afaka mampiasa syringe iray ihany ve aho fa fanjaitra hafa?
Azo ekena ve ny mampiasa tsindrona mitovy amin'ny tsindrona marary mihoatra ny iray raha manova ny fanjaitra eo anelanelan'ny marary aho?Tsia. Rehefa ampiasaina izy ireo, dia samy voaloto ny syringe sy ny fanjaitra ka tsy maintsy ariana.Mampiasà syringe sy fanjaitra sterile vaovao ho an'ny marary tsirairay.
Ahoana ny fomba fanadiovana ny syringe?
Araraka ao anaty kaopy, satroka, na zavatra hafa izay hampiasainao ihany ny bleach tsy misy rano (tena feno, tsy misy rano ampiana).Fenoy ny syringe amin'ny alàlan'ny fisarihana ny bleach amin'ny alàlan'ny fanjaitra mankany an-tampon'ny syringe.Ahozongozona izany ary tapaho.Avelao ao amin'ny syringe mandritra ny 30 segondra ny fanasan-damba.